သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ရိုဟင်ဂျာကိစ္စအဆိုပြုချက်ကိုကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအကြီးအကဲပယ်ချ ~ Rohingya Blogger
Photo: Planet Myanmar Network
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်သည် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးအကြီးအကဲ Mr. Antonio Guterres အား ဇူလိုင်လ (၁၁) ရက်နေ့တွင်နေပြည်တော်၌လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင်ဦးသိန်းစိန်မှမိမိအနေဖြင့်တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာသောရိုဟင်ဂျာများကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာများကို UNHCR သို့လွှဲပြောင်းပေးပြီး UNHCR မှစောင့်ရှောက်ရန်လိုကြောင်း၊ လက်ခံမည့်တတိယနိုင်ငံများသို့ ပို့ပေးရန်စဉ်းစားနေကြောင်း Mr. Guterres ကိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ရေးသားထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ယနေ့Mr.Guterresမှပြောကြားရာတွင်ဦးသိန်းစိန်ပြောကြားသောကိစ္စသည်မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်းမှ
အခု ရခိုင်မှာရှိတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေဟာ UNHCR က သတ်မှတ်တဲ့ ဒုက္ခသည်စာရင်းထဲမှာ မဝင်ပါဘူး။ UNHCR မှ ချမှတ်ထားသော ဒုက္ခသည် သတ်မှတ်ချက်နှင့် ညီမှ တတိယနိုင်ငံသို့ ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။" ဟု ကြာသပတေးနေ့ ညနေ ရန်ကုန်မြို့ ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသွားသည်။ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းဆိုသည်မှာတနိုင်ငံမှတနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာတွင်ထူးခြားသောအခြေ
အနေများကြောင့်သာပြန်လည်နေရာချထားခြင်းဖြစ်ပြီးယခုဖြစ်ပွားနေသောအခြေအနေနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိကြောင်းသတင်းထောက်များကိုပြောဆိုခဲ့ကြောင်းအေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာနမှရေးသားထားသည်။ သမ္မတက ဥပေဒအရ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၁၉၄၈ မတိုင်ခင် ရောက်ရှိသူ မိဘနှစ်ပါးက မွေးဖွားသူ တတိယမျိုးဆက်မြေးအဆင့်ကိုသာ နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်သည်ဟုလည်း သမ္မတက ထည့်သွင်းဆွေးနွေးသည်ကို ရေးသားထား သည်။
ကုလသမဂ္ဂမှအတည်ပြုထားသောကိန်းဂဏန်းများအရ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းတွင်နေထိုင်သောရိုဟင်ဂျာ ၈ သိန်းခန့်နေထိုင်နေ သည်ဟုသိရသည်။ နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ချီ၍နေထိုင်ကြသောလည်းနိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းမရှိပေ။
Anonymous13 July 2012 02:58Mr. Reformist President ( U Thein Sein)In 21st century very person have little knowledge, what is wrong & right .Since violence was start peace loving peoples, media & other NGO are commending that Government behind on this violence.Mr. Reformist leader, your official website claim that you are committed crime against humanity & systematic Genocide in Arakan on Rohingya peoples. On this sensitive period you have to be minimized this violence, now we are seeing that you are pumping Rakhine racist peoples.In Arakan we Rohingya peoples are always looking co-existence other community living together side by side with peace & harmony.Mr Reformist President, I would like to inform you that ICC is waiting for your genocide case to verify in justice ,Don't forget it isa21st century not likea19th century which your Rakhine Racist make massacre in 1942.Nowday anybody who make crime against humanity will be in justice.I am very shameful to used your title asaMr Refomist President ( U Thein Sein )..ReplyDeletezaw13 July 2012 10:22dont think so....myanmar is not like stupid muslim supermen like gaddafi, saddam... they will slowly eradicate by phyat4phyat...this method was used successfully to demolish communists n partially to myanmar bangalis.....but ita not best solution.... bangalis shall not go against myanmar...u shall tone down ur nationalism n religion. .try to be more myanmar..... n convinceore sympathy fromReplyDeleteAnonymous13 July 2012 15:21We always stay beside of our president....at the end of the day.....ReplyDeleteAnonymous15 July 2012 05:38UNHCR အကြီးအကဲတက်တက်စင် လွှဲတော့တာပဲ။ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အကောင်တွေကို သူကဒုက္ခသည်အဖြစ်မသတ်မှတ်နိူင်ဘူး။ ဒုက္ခသည်ဆိုတာ တစ်နိုင်ငံကတစ်နိုင်ငံကို ဖြတ်ကျော်လာရောက်နေထိုင်တဲ့သူ ကိုမှ သတ်မှတ်တယ် လို့ဆိုတယ်။ ဆိုတော့ သူ့ကို ကျွန်တော်တို့က ပြန်မေးရမယ်...သူတို့ဟာrefugees မဟုတ်ဘူးဆိုရင် သူတို့ကိုဘာဖြစ်လို့ UN organizations တွေနဲ့ INGOs တွေက ဒီမောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်အပါ အ၀င် တခြားနေရာတွေမှပါ နှစ်ပေါင်း၂၀လောက် ထောက်ပံပေးနေတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘာအတွက်လဲ။ ကဲ UNHCR ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး ဖြေပါ။ReplyDeletezaw15 July 2012 14:44i think president himself confused at this moment same thing happened to ASSK... the situatiin there now is quite completed due to recent incident.....emotion has been flared up so not possible to judge whats right wrong whos legal who r illegals.....for most burmese its fair that they cant distinguish locals with bangali origins from those illegals since they all looks same. their names r mostly like bangaladeshis rather than myanmar muslims who dont put muslim name in IC....and majority of people down there got little knowledge in myanmar language....its good all local with bangli orogins or rohingyas learn to speak write n understand myanmar language n culture so as they can be easily differentiated.....and got more bargaining power qhen start talk about nationality....there must be always give n take....cant be like die die want to mantain bangali cultures then be myanmese.MORE myanmese doesnt mean u lose ur religion since as god said IMMAn is most important wherever u in.....esp myanmeae r easy to give in...ReplyDeleteAdd commentLoad more...